Monday January 13, 2020 - 13:40:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Weerar hor leh oo xoogagga Al Shabaab ay ku qaadeen dhulka NFD ee dowladda Kenya gummeysato ayaa sababay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray dad Kenyaan Nasaara ah.
Sawir hore weerar ka dhacay Lamu
Wararka ka imaanaya gobolka Gaarisa ee NFD ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan Mujaahidiinta Al-Shabaab ay saakay aroortii hore weerar ku qaadeen deegaan hoostaga Magaalada Gaarisa ee ku hoos jirta gumaysiga Kenya.
Xoogag aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa saaka aroortii hore weerar qorshaysan ku qaaday deegaanka Kamuuda oo qiyaastii 35 KM ujira magaalada Gaarisa ee dhulka NFD.
War kasoo baxay taliska ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarka lagu qabsaday xero ciidamada Booliska Kenya ku lahaayeen deegaanka islamarkaana laga soo qaniimaystay hub iyo saanad ciidan oo aad u farabadan.
"Ciidamada Mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan oo ay ka fuliyeen deegaanka Kamuuda ee dhaca duleedka Gaarisa waxay kula wareegeen gacan ku heynta deegaanka, Alle mahaddiis mujaahidiinta ayaa dilay sedax Macalimiin Nasaaro Kenyaan ah waxayna gubeen saldhiggii Booliska iyo xarumihii maamulka waxayna soo qaniimeysteen hub ay goobta uga carareen ciidamada Kenya" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Wararka ayaa intaas ku daraya in xoogagga weerarka qaaday ay muddo saacada ah ku sugnaayeen deegaanka Kamuuda islamarkaana ay baaritaanno ku sameeyeen guryo ay lahaayeen saraakiisha Booliska Kenya ka hor intii aysan dib uga guran deegaanka.
Warbaahinta maxalliga Kenya ayaa faafisay sawirro muujinayay burbur weerarka kasoo gaaray saldhigga Booliska deegaanka Kamuthe iyo dhismaha xarun ay laheyd shirkadda isgaarsiinta Safaricom.
Al Shabaab ayaa sare uqaadday weerarada ay ku beegsanayso saldhigyada ciidamada Kenya ee gobollada Wajeer,Gaarisa,Laamu iyo Mandheera oo dhammaatood kawada tirsan dhulalka muslimiinta ee Kenya xoogga ku haysato.
Todobaadyadii lasoo dhaafay waxaa weeraro xiriir ah ay ka dhacayeen gobollada Muslimiinta ee ay Kenya xoogga ku haysato, sida gobollada Gaarisa, Mandheera, Wajeer iyo Lamu.
Weerarkii ug xoogganaa ayaa ka dhacay saldhigga ciidamada cirka Maraykanku ay ku leeyihiin deegaanka Manda Bay ee gobolka xeebta ku yaalla ee Lamu, waxaana halkaas lagu dilay 17 kamid ah ciidamada Maraykanka iyo 9 Kenyaati ah, waxaana lagu burburiyay 7 kamid ah diyaaradaha dagaalka ee wadamadaas.